China LSR Mask vagadziri uye vanotengesa | Chapman
✭Nekuda kwekukwirira kwakanyanya kwechinhu ichi chemvura silicone, isu tagadzira 6 seti yeLSR mafuru kune vatengi vedu yakazara. Huwandu hwemakomba muforoma yega yega ndi4 mhango, uye epamberi neshure matemplate akagadzirwa neS136 yakaoma simbi zvinhu, uye kuomarara ndeye HRC48-52 degrees.
✭Nekuda kweyakaomarara chigadzirwa chitarisiko zvinodikanwa, mutsetse wekuparadzanisa wechigadzirwa unofanirwa kudzorwa mukati me0.03mm. Yedu yekuumbwa kugadzira kunyatso inofanirwa kudzorwa mukati meiyo huwandu hwe0.005-0.01mm. uye isina kujairika yekuparadzanisa pamusoro, zvakaoma kwazvo kuumba kwedu kugadzira. Isu tinofanirwa kuona kuti yedu yekugadzirisa michina uye tekinoroji zvinokwanisa kusangana nevatengi zvinodiwa. Kuburikidza nemazuva makumi matatu nemashanu ekugadzirisa nekugadzira, kuyedzwa kwedu kweforoma kwakabudirira kwazvo, uye vatengi vedu vakabva vaisa mukugadzirwa kwakawanda.
Muforoma NO. CPM-20-S1066
Pamusoro Pedza Maitiro VDI-12
Zvinyorwa zvePurasitiki Nesilicon
Chikamu uremu 50.7g
Chikamu chemazana 128.00 X 120.00 X 65.00mm
Saizi yekukura 400 X 450 X 417mm
Chikamu Zita LSR Mask
Mould Material S136 / P20
Lead Nguva 35mazuva
Muforoma Kutenderera Nguva: 120's
Yakagadzirwa ne eco-inoshamwaridzika isingashandisike silicone yekufema ine mweya-yakasungwa chisimbiso, iyo Mask yakatanga yakagadzirirwa uye kugadzirirwa vashandi vemberi munzvimbo dzine njodzi. Iye zvino zvave kuwanikwa kune wese munhu.
Ichi chifukidzo zvakare chiri chekutanga cherudzi * * nekuti chinovimbisa yakakwira yekudzivirirwa nekuda kwayo yekuvandudza uye inochinjika katuriji dhizaini. Nekuti inogadzirwa kubva ku-biocompatible ganda-inoshamwaridzika zvinhu, iyo maski inogona kuiswa nyore nyore, kushandiswazve zuva nezuva uye inogona kutora kusvika kumakore maviri.
Iyo coronavirus inopararira kuburikidza nemadonhwe ekufema kana munhu ane hutachiona akosora kana kuhotsira, kana kubva pakusangana neiyo yakasviba nzvimbo uye nekubata maziso ako, mhino kana muromo.
Yakagadzirwa ne3D kumeso dhata kuti ienderane nemhando dzakasiyana dzechiso, iyo yakapfava silicone inoenderana nevanopfeka 'kumeso kumeso, ichiita kuti ive yakanaka kupfeka kwenguva refu pasina kugadzirisa, kupwanya kana kutsamwa.
Pashure: Diki chaiyo servo yekufambisa giya kuvhara
Zvadaro: Control Unit uye Charge Connector pasi pevhavha